को पर्दा इस्लाम एउटा स्वीकार छ | Apg29
को पर्दा र लुगा तिनीहरूले मुस्लिम छन् भन्न
एक केटी एक पर्दा लगाएका।
जब जवान स्वीडिश महिला मुस्लिम बन्न, तिनीहरूले त्यसपछि मुसलमान शाल छिटो लिन। तिनीहरूले मुस्लिम थिए अघि तिनीहरू यो गरेन। यसरी रूमाल वा पर्दा अब तिनीहरूले मुस्लिम छन् र इस्लाम आबद्ध एक स्वीकार भएको छ।
सामान्य सडक दृश्य
म Forserum देखि आठ किलोमिटर बाँचिरहेका छौं। Forserum मा धेरै मुस्लिम बाँचिरहेका छौं। म Forserum आउन गर्दा मेरो कार देखि म सिधै हेर्न मुसलमान महिला सडकमा हिंड्न। यो एक साधारण सडक दृश्य छ।
त्यहाँ मुसलमान महिला हुन् भनेर म कसरी थाह पाउन सक्नुहुन्छ? म आफ्नो लुगा मा हेर्नुहोस्। तिनीहरूले टाउको र व्यापक वस्त्र मा स्कार्फ छ। आफ्नो लुगा त्यसैले तिनीहरूले मुस्लिम छन् भन्ने पुष्टि।
म हेर्न यी लुगा छ नगर्ने मान्छे, म तिनीहरू मुस्लिम छन् किनभने लाग्छ। अर्को शब्दमा, लुगा तिनीहरूले मुस्लिम छन् भन्ने स्वीकार। तिनीहरूले मुस्लिम छन् भन्ने संसारमा देखाउँछ।
आफ्नो कपाल र आफ्नो छाती कवर
यसलाई मुसलमान महिला आफ्नो कपाल र शाल वा घुम्टोमा आफ्नो छाती कवर गर्नुपर्छ भनेर कुरान भन्छन्। यसरी लागि मानिसहरूले तिनीहरूलाई molest islam.se मुस्लिम वेबसाइट अनुसार गरिने छैन भनेर तिनीहरूले मुस्लिम छन् भन्ने देखाउन। तिनीहरूलाई बलात्कार। तिनीहरूले मानिसहरू molest र बलात्कार गर्न को लागि यो निःशुल्क छ कि दास वा बेग्लै विश्वास छैन कि देखाउनेछ।
कुरान: अनि तिनीहरूले शालीनता देखिने हुन सक्छ भन्दा आफ्नो सिंगार बढी देखाउन आफ्नो Gaze कम गर्नुपर्छ र आफ्नो निजी भागहरु रक्षा कि र छैन विश्वास महिलाहरु भन्छन्; त्यसैले तिनीहरूको veils (Khimar) भनेर bosoms आकर्षित गरौं ...
यो पद, को पर्दा को लगाएका लागि आधार छ जो कुरान गरेको 24 अध्याय, संख्या 31 छ। यो पद छलफल मुस्लिम को संज्ञा उल्लेख गर्दा Khimar "पर्दा" को रूपमा अनुवाद। मोहम्मद Knut Bernström यो कुरान को यसको व्याख्या मा पद गर्न फुटनोटमा लेख्नुहोस्:
को संज्ञा Khimar (plur। Khumur) अघि अरब महिला र इतिहासको इस्लाम को आगमन पछि बाल संलग्न बानी थियो कि पर्दा सङ्केत गर्छ। को पर्दा थप वा कम Ornamental थकित भन्दा क्लासिक टिप्पणीकारहरू अनुसार, शिथिल फिर्ता तल झुन्डिएको र त्यसपछि व्याप्त फैशन अन्तर्गत महिला परिधान एक अगाडि décolletage जीवन समावेश किनकी, बस्ट भाग पट्टी थियो। महिला एक Khimar को मद्दत यसलाई लुकाउन किन यहाँ सोधे छन्।
आफ्नो टाउको कवर
Bernström उल्लेख रूपमा शास्त्रीय टिप्पणीकारहरू एक Khimar समेट्छ र टाउको ढाक्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ शब्द व्याख्या इब्न Kathir (घ। 1373) छ। को पर्दा संलग्न मतलब वरिपरि यो पुल र यो सुरक्षित बनाउन। यो केही तिनीहरूलाई को देख्न सकिन्छ भनेर घाँटी र छाती भन्दा हुनेछ। इब्न Kathir पनि इस्लाम मुहम्मद पत्नी 'A'ishah को अगमवक्ता दिछन:
परमेश्वरको अनुग्रह प्रारम्भिक emigrants को महिला मा हुन सक्छ। त्यसपछि परमेश्वरले पद प्रकट: तिनीहरूले bodices tore र तिनीहरूलाई राख्नु 'तिनीहरूलाई त्यसैले आफ्नो veils को Bosom ढाक्न आकर्षित गरौं'।
को पर्दा र मुसलमान लुगा उद्देश्य तिनीहरूले ध्यान आकर्षित छैन भन्ने छ। तर म यसलाई विपरीत छ भन्छन्। मेरो आँखा लगाउने मुस्लिम महिला विभिन्न लुगा र veils सीधा कोरिएका हुन्छन्। तिनीहरूले भीड बाहिर खडा।
ट्रिम गर्न सही हुन भन्ने ठानेको गरिनेछ भेट पर्छ भनेर अवस्था एक नम्बर हो। यी समावेश:
माथि वर्णन रूपमा, सम्पूर्ण शरीर ढाक्ने पर्छ।
यो नै एउटा सिंगार हुँदैन। को असबाब अर्को शब्दमा, पाठ्यक्रम पद 24:31 को connotations मध्ये एक छ जो, आफै अनावश्यक ध्यान आकर्षित छैन।
लुगा पारदर्शी हुनु हुँदैन।
तिनीहरूले छाडा हुनुपर्छ र तिनीहरूले शरीर प्रकारका देखाउने वा सुगन्धित हुन भनेर होइन अन्य चकमा।
तिनीहरूले पुरुषहरु लुगा वा disbelievers को लुगा सदृश हुँदैन।
दौंतरी अबू Umamah उहाँले अगमवक्ता मुहम्मद सुनेको मलाई भन्नुभयो - शान्ति उहाँमाथि हुन - भन्छन्:
मलाई छ कुराहरू ग्यारेन्टी र म तपाईंलाई प्रमोदवनमा ग्यारेन्टी हुनेछ: तपाईं को एक बोल्न गर्दा उहाँले झूठ छैन; उहाँले भरोसा धोका छैन केहि सुम्पिएको; उहाँले एक प्रतिज्ञा यदि त्यो तोड्न छैन; आफ्नो आँखा कम; आफ्नो हात फिर्ता पकड र आफ्नो निजी [शरीर] भागहरु सुरक्षा।
त्यहाँ महिला पोशाक अर्डर सही हुन हुनुपर्छ कसरी लागि नियमहरू छन् जस्तै त्यहाँ पनि मानिसको पोशाक लागि प्रबन्ध छ। यी तिनीहरूले जो उदाहरणका लागि अर्थ तिनीहरूले रेशम को छैन गरे गर्नुपर्छ भनेर वा यी दुई सामाग्री महिलाहरु को लागि सुरक्षित गर्दा सुन समावेश, (हलाल) अनुमति समावेश। त्यसैले तिनीहरू शरीर भागहरु mannan उपयुक्त छैन (awrā ') को एक देखाउन पनि पातलो वा पारदर्शी हुनु हुँदैन। तिनीहरूले disbelievers लुगा अनुकरण हुँदैन र यो सिफारिस गरिएको छ (mustahabb) सेतो लुगा लगाउन। साथै, यो पनि तिनीहरू गर्न र वाहक प्रसिद्ध र यसको लागि प्रसिद्ध छ ध्यान आकर्षित गर्ने यस्तो तरिकाले बाहिर खडा लुगा लगाउन निषेध गरिएको छ।
veils लगाएका साना बच्चाहरु
तिनीहरूले जब बच्चाहरु किशोरावस्था आउन, तिनीहरूले यी veils लगाउने कि भन्छन्, तर म अक्सर जवान छोराछोरीलाई veils लगाउने हेर्नुहोस्। यसरी, छोराछोरी sexualized बन्न र मुसलमान विश्वास गर्न बेहोश अवस्थामा profess छन्।
मोना Sahlin र लीना Hjelm-Wallens स्कार्फ
सेप्टेम्बर 11 मा, 2001 कि 3,000 अमेरिकी सम्म मारे र थप भयानक युद्ध सिर्जना संयुक्त राज्य अमेरिका मा भयानक आतंककारी आक्रमण देखे। जब आफ्नो टाउको मा स्कार्फ एक स्वीडिश मस्जिद मा सरकार सदस्य मोना Sahlin र लीना Hjelm-Wallen गरे। यो पाठ्यक्रम धेरै विरक्तलाग्दो र एक अबोध्य कार्य जस्तै लाग्न सक्छ।
: चित्र देख्न एक मस्जिद एक यात्रा मा Mahmoud Aldebe, लीना Hjelm-Wallen र मोना Sahlin 11 सेप्टेम्बर पछि ।
तपाईं दयालु, छैन थप conspiratorial हो भने, यो सायद आफ्नो समर्थन गर्न थियो, तर अब को लागि शाल एक स्वीकार तर आफ्नो स्कार्फ केही थियो जो मुसलमान विश्वास, हामी यस लेखमा विस्तृत छलफल गरेको, एक स्वीकार छ मुस्लिम विश्वास!
तिनीहरूले सरकार दुई शाल सजी सदस्य देखे जब तपाईं मुस्लिम सोच कस्तो लाग्छ? तिनीहरूले ख्रीष्टियनहरूलाई थिए लाग्यो? वा तिनीहरूलाई मुस्लिम उल्लेख? तिनीहरूले गवाहीलाई पल्ट तिनीहरू मुस्लिम थिए टाँसन द्वारा।
मोना Sahlin मुसलमान छ कि गवाही
तर वास्तवमा त्यहाँ साक्षी मोना Sahlin वास्तवमा मुसलमान छ कि एक सङ्केत छ, वा कम से कम छ। यो गवाही मुस्लिम महिला नलिन Pekgul एक सामान्य चुनाव सामना आउँछ:
"कसैले मोना Sahlin, उदाहरणका लागि, त्यो अरूको अधिकारको guarantor भन्दा सायद यो देशमा हुन तपाईंलाई लाग्छ कि किनभने यो थप Tensta टिकटिक हुनेछ धेरै अन्य मुस्लिम कहिल्यै टिकटिक गर्ने।"
मेरो बोल्ड। र:
"म त्यो (Sahlin) सूची tops कि म उनको विश्वास किनभने, म Tensta कुनै पनि रकम बेचन गर्न सक्छन्, तर शायद म बेच्न छैन धेरै खुशी छु कुनै पनि अन्य मुस्लिम नै तरिकामा"
2017 मा इरान गर्न राज्य भ्रमण
सरकार फेब्रुअरी 2017 मा इरान गर्न यात्रा संग जडान मा महिला सेवकहरू पर्दा लगे। पाठ्यक्रम यो धेरै अनौठो दिइएको अन्य देशहरूमा 'राज्य यात्रा मा महिला सहभागी छैन त्यसै गर्न compelled महसुस थियो।
: चित्र देख्न टाँसन सेवकहरू।
त्यसैले यो स्वीडिश डेलिगेसन अनुपम कुरा थियो। यो सहानुभूति वा चापलुसी अभिव्यक्ति भन्दा बढी केही थियो? यो मुसलमान विश्वास गर्न स्वीकार थियो?
एन Linde पर्दा उनको नीति प्रकट
को इरान मा पर्दा लगाएका को वाणिज्य वर्तमान विदेशी मन्त्री एन Linde भ्रमण 2017।
धेरै पक्कै Margot Wallström राजीनामा भनेर समाचार आनन्दित, तर आनन्द वाणिज्य एन Linde उनको eftertädde कि दिइएको पर्याप्त छोटो थियो।
त्यो फेब्रुअरी 2017 मा इरान गर्न भ्रमणको थियो र आफूलाई (https://media.publika.md/en/image/201702/full/_94625808_annlindeirna_41696400.jpg) अन्य महिला सेवकहरू साथ घुम्टो। त्यो पर्दा लिए कि विचार त्यसैले यो त्यो छैन इजरायल र प्यालेस्टाइन प्राधिकरण बीच द्वन्द्व निष्पक्ष एक सङ्केत दिन्छ।
त्यो मध्य पूर्व केवल लोकतन्त्र, इजरायल विरुद्ध पक्कै छ र आफ्नो पूर्ववर्ती Margot Wallström गरेको पाइला जान्छ।
2011 नियुक्त प्यालेस्टाइन संघ एन Linde "वर्ष प्यालेस्टाइन" निम्न कथन संग:
एन Linde, आफ्नो काम र समर्पण मार्फत, प्यालेस्टाइन र इजरायल मा आफ्नो यात्रा, आफ्नो सम्पर्क र दुवै दल छलफल, lucidity, स्पष्टता र साहस संग फिलीस्तीनियों 'अवस्था, हालै रूपमा भविष्य प्यालेस्टाइन राजधानी रूपमा पूर्व यरूशलेमको पहिचान जोड राज्य र संयुक्त राष्ट्र को सदस्य संख्या 194 रूपमा प्यालेस्टाइनको पहिचान। शान्ति र न्याय को लागि एन Linde गरेको संघर्ष सधैं अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकार सिद्धान्तहरूमा एक ध्यान थियो।
को पर्दा के यो मध्य पूर्व नीति, त्यो वाणिज्य सार्ने हो प्रकट गर्छ। त्यसैले यहाँ त्यो 2008 मा तेल अवीव मा एक लोकतन्त्र पाठ्यक्रम भने:
"शान्ति लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जरूरी भएको Israeli पेशा समाप्त छ जहाँ इस्राएल र प्यालेस्टाइन, बीच द्वन्द्व, यो शान्तिपूर्ण दिशा मा विकास गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण मध्य पूर्व गर्न प्रमुख छ।"
त्यो पहिले नै 2008 मा एक देश रूपमा "प्यालेस्टाइनमा" बताइएको याद, सामाजिक लोकतान्त्रिक सरकार यो देश छैन तापनि, देश रूपमा मान्यता प्राप्त दुई वर्ष।
को पर्दा तपाईं बचाउन सक्दैन
तेहरान मा, इरान लागि मुसलमान अपराध गर्न 2018 मा एक महिला, जेलमा दुई वर्ष सुनाइसकेको थियो भयो सार्वजनिक आफ्नो घुम्टो हटाइएको । दुई महिना मा मैदान मा 30 महिला पक्राउ तिनीहरूले पर्दा लगाउन इन्कार गरेको छ।
इरान दुवै मुस्लिम र गैर-मुस्लिम महिला लागि पर्दा को लगाएका मा व्यवस्था रक्तपातपूर्ण इस्लामी क्रान्तिको 1979th देखि शक्ति मा गरिएको छ
को पर्दा तपाईं सुरक्षित गर्न सक्दैन: मलाई स्पष्ट यो भन्न गरौं। बरु, यो दमन र मुसलमान वा छैन कि, तपाईं subjugate एउटा माध्यम हो।
साँच्चै तपाईं सुरक्षित गर्न र तपाईँ पूर्ण निःशुल्क राख्न सक्छ कि केवल एक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ
परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई प्रेम, तर कुनै पर्दा त सुरक्षित गर्न वा भगवान प्रसन्न तुल्याउन सक्छौं। तपाईं सुरक्षित र साँच्चै कृपया परमेश्वर, त्यसपछि के तपाईं येशू ख्रीष्टको आफ्नो छोरालाई उहाँले तपाईं सुरक्षित गर्न क्रूसमा मर्न संसारमा पठाएको जसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ पर्दैन।
येशूले आज जीवित छ - उहाँले मरेका देखि पुगेको छ। तपाईंले उहाँलाई प्राप्त जब तपाईं सुरक्षित र स्वतन्त्र हुनेछ। येशू ख्रीष्ट साँच्चै मान्छे मुक्त सेट गर्छ।
बाइबल पनि पर्दा वा शाल बुझाउँछ, तर यस सन्दर्भमा यो त्यहाँ अनुकूलन बिना कुनै व्यवस्था छ कि स्पष्ट छ। येशूले तिनीहरू फेरि कैद मा राख्न जाँदैछन् किनभने, तर तिनीहरू मुक्त रहन कि, मान्छे मुक्त गरेको छ।
मोना Sahlin इस्लाम रूपान्तरित?